Izici Ezi-7 Zomqashwa Kwezenhlalo | Martech Zone
Izici Ezi-7 Zomqashwa Komphakathi
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
NgoMsombuluko, sabelane nge-infographic evela ku-Blue Focus Marketing, Umkhiqizo wakho njengePlanethi, Ukunikeza ubufakazi nokufaniswa okulula okukhuluma emandleni okusebenzisa abasebenzi bakho ukusiza ukukhulisa umkhondo wakho wezokuxhumana. Kuyedlula ukunanela umkhiqizo wakho, noma kunjalo, njengoba uzobona ku-infographic yabo entsha.
Njengoba sichaza encwadini yethu ethengiswa kakhulu e-Amazon, Isisebenzi Somphakathi: Izinkampani Ezinkulu Zenza Kanjani I-Social Media Work, akunakuphutha ukuthi ubudlelwane bemikhiqizo kumakhasimende abo nakubasebenzi bayashintsha. Ku-bazaar yedijithali, izwi eliyiqiniso lesisebenzi senhlalakahle lingaba yimpahla enamandla kakhulu yomkhiqizo ekwakheni ubudlelwane besikhathi eside, obunamandla namakhasimende namanye amalungu abalulekile emiphakathi eku-inthanethi.
Ukuzibandakanya kwabasebenzi, ukufakwa kwabo emsebenzini wabo ezinkundleni zokuxhumana, ukuzibophezela kwabo enkampanini, ukukwazi kwabo ukusebenzisana, amakhono abo okulalela, amakhono abo amakhasimende kanye nekhono labo lokuthonya ushintsho enhlanganweni konke kuyizici zesisebenzi sezenhlalo esihle. Manje okudingeka ukwenze nje ukuwathola!
Tags: ukumaketha okugxilwe okwesibhakabhakaisisebenzi senhlalakahleincwadi yabasebenzi bezenhlalakahleisisebenzi senhlalakahle
Izikhali Eziyimfihlo Zokumaketha Okungcono Nokuthengisa